Umama wehlule ingane yakhe kubhalwa izivivinyo esikoleni | News24
Umama wehlule ingane yakhe kubhalwa izivivinyo esikoleni
New Delhi – Umama waseNdiya oneminyaka engu-37 ubudala uhlule ingane yakhe ngamalengiso ngesikhathi kubhalwa izivivinyo esikoleni, ngokwemibiko yangoLwesibili.
UNayanmoni Bezbaruah, wasendaweni yase-Assam, uphase ngo-69.8% kwathi indodana yakhe eneminyaka engu-18 ubudala, u-Ankur, wehluleka yena ukuphasa, kubika iHindustan Times.
Umama uphase ngenxa yokuzimisela, kusho uSontora Gogoi, uthishanhloko wesikole iKhowang Pithubor okuyilaphbo kufunda khona uBezbaruah.
Funda nalolu daba: Video: Ngabe leli jaji lilele enkantolo?
UBezbaruah kuthiwa uvuka ekuseni ngo-04:00, enze imisebenzi yasendlini, bese elibhekisa esikoleni ehamba ngebhayisikili lakhe.
Ebusuku ulalisa izingane zakhe kuqala ngaphambi kokuba enze umsebenzi wesikole, phela unamanye amadodana amabili kanye nendodakazi.